Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Medicines mostly used (1) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (A to D)
Medicines mostly used (1) အသုံးများ ဆေးဝါးများ (A to D)
1. Acamprosate Campral® ကို အရက်ဖြတ်ရာမှာသုံးသည်။ 666 mg TDS 2. Acebutolol = (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ 200-1,200 mg OD/BD; Children = 20 mg BD/TDS 3. Acetylsalicylic acid, Aspirin, Barbiturate, Buspro, Sodium Salicylate, NSAID (စတီရွိုက်) မပါသည့် အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင် ကျဆေးအုပ်စု၊ (ရူမက်တစ်) လေးဘက်နာရောဂါ၊ သွေးခဲပြီး သွေးကြော ပိတ်ခြင်းအတွက်လည်း ပေးသည်။ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children 160-240-320-325-480 mg QID 4. Achromycin = Tetracycline ပိုးများစွာကို နိုင်သည့် ပဋိဇီဝဆေး၊ 5. Aciloc = Ranitidine = Histamine-2 blockers လေနာဆေး၊ 6. Acivir DT, Acyclovir, Cyclovir, Aciclovir, Acyclovir ရေယုံဆေး၊ 1000 mg; 15 mg/kg ရေယုံ၊ 7. Acne Lotion 10 (Alcohol and Sulfur), Acnesol ဝက်ခြံ၊ အရေပြားအဆီပြန်ခြင်း လိမ်းဆေး၊ 8. Acyclovir (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆေး၊ Shingles, Herpes ရေယုံအမျိုးမျိုး၊ Genital herpes လိင်လမ်း-ရေယုံ၊ Cold sores (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ) ပါးစပ်နာ၊ Chicken pox ရေကျောက်၊ a. 30 mg/kg ဦးနှောက်-အာရုံကြောရေယုံ၊ b. 800 mg TDS (HIV) ရှိသူရေယုံ၊ c. 800 mg TDS or 200 mg5times/day x 7-10 days မွေးလမ်းရေယုံ၊ d. 200-800 mg x5times/day x 7-14 days ရေယုံကြောင့် မျက်ကြည်လွှာ ရောင်ခြင်း၊ e. 400 mg3times/day (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ) ပါးစပ်နာ၊ f. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့၊ အန်၊ ဝမ်းချုပ်၊ 9. Acriflavine ဆေးဝါရည်။ အနာထဲ ထည့်ဆေး။ အဝတ်အစားတွေကို ဝါစေတယ်။ မျက်စိထဲ မဝင်စေရ။ 10. Adefovir, Dipivoxil Tablets (Adfovir) လူကြီးများအတွက် အသဲရောင်-အသားဝါ(ဘီ) ရောဂါဆေး၊ 11. Adelphane (Reserpine + Dihydrallazine) သွေးတိုး၊ Up to 500 mcg x2weeks and reduced to 250 mcg daily ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျ၊ ခေါင်းကိုက်၊ 12. Adelphine-Esidrex ဆီးသွားစေသည့်ဆေးနှင့် ရောထားသော သွေးတိုးကျဆေး၊ 13. Adrenalin (Epinephrine) (အနာဖလက်တစ်-ရှော့ခ်) အတွက် အသက်ကယ်ထိုးဆေး၊ (အလာဂျီ) ရခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ မျက်စိ ရေတိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ လေပြွန်ကျဉ်းခြင်း၊ ထုံဆေးပေးစဉ် သွေးထွက် နည်းစေရန် ရောထိုးနိုင်သည်၊ (0.01 mg/kg) 1 to 10 mg IV-S/C 1:10,000 solutin may be repeated at5min interval ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အန်၊ မူးဝေ၊ ချွေးထွက်၊ အစာအိမ်မကောင်း၊ ဂနာမငြိမ်၊ ရင်တုံ၊ 14. AKT4= (1 capsule of Rifampicin 450 mg,2tablets of Pyrazinamide 750 mg and 1 tablet of Ethambutol 800 mg plus Isoniazid (INH) 300 mg) ၄ မျိုးတွဲ တီဘီဆေး 15. Albendazole, Albenza, Albazole, Albendol, Albex, Mebendazole သန်ချဆေးများ၊ a. Filariasis: Albendazole 400 mg stat + Ivermectin 200 μg/kg; 400 mg BD x3weeks ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ပါတ်။ b. Giardiasis: Albendazole 400 mg daily x5days (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်၍ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၅ ရက်။ c. Hookworm (Ankylostomiasis) : Albendazole 400 mg BD x3consecutive days + Ferrous sulfate 200 mg TDS x3months ချိတ်သန်ကောင်၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်ဆက်တိုက်။ d. Neurocysticercosis: Albendazole 400 mg BD for Children 15 mg/kg BD x 8-30 days အာရုံကြောစနစ်ထဲရောက်သည့် သန်ကောင်၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၈-၃ဝ ရက်။ e. Pinworms (Enterobius vermicularis) : Albendazole Adult and above2years = 400 mg HS Children above2years = 200 mg HS often repeated after2weeks; Children below2years ½ dose စအိုယားစေသည့် ပင်အပ်ပုံ သန်ကောင်၊ ညအိပ်ရာဝင် ၁ ကြိမ်။ ၂ ပါတ်နေရင် နောက်တခါထပ်သောက်။ f. Roundworm: Albendazole 400 mg stat or for 2-3 days; Children below2years ½ dose သန်လုံးကောင်၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၂-၃ ရက်။ g. Threadworm (Seat worm, Strongyloides) : Albendazole Adult = 400 mg OD/BD x3days; Children below2years ½ dose အရေပြားက တဆင့် ဝင်သည့် သန်ကောင်၊ ညအိပ်ရာဝင် ၁ ကြိမ်၊ ၃ ရက်။ h. Tapeworm (Echinococcosis, Hydatid disease, Hydatid cyst) : Albendazole Adults and children 400 mg BD PC x 28 days repeat in 14 days တိပ်ပြားပုံ သန်ကောင်၊ တနေ့ (အစာနဲ့) ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်။ i. Whipworm (Trichuriasis) : Albendazole Adult and above2years = 400 mg tablet BD or HS x3consecutive days; Children below2years ½ dose ကျာပွတ်နှင့်တူသော ဝမ်းပျက်စေသည့် သန်ကောင်၊ ညအိပ်ရာဝင် ၁ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်။ j. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ဆံပင်ကြွတ်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် မပေးသင့်၊ 16. Alconefrin, Phenylephrine Nasal Drops နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းအတွက် ထည့်ဆေး၊ 17. Aldactone = Spironolactone, Potassium-sparing Diuretics ပိုတက်စီယမ် မလျှော့နည်းစေသည့် ဆီးသွား စေသည့်ဆေး၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါအတွက်သုံးသည်။ 25-100-400 mg 18. Alerid Cold Tablets (Cetirizine dihydrochloride5mg + Phenylpropanolamine 25 mg + Paracetamol 500 mg) (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ Adult = 1 BD; Children = ½ of adult dose ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အိပ်ချင်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ 19. Alfacalcidiol (Calciferol) 1.4 ug/kg daily ဗီတာမင်(ဒီ)၊ အရိုးကြီးထွားစေရန်၊ 20. Alfit = (Protein Hydrolysate + Vitamin B 1 + B2+ B6+ Niacinamide + Iron Choline Citrate + Magnesium Chloride) သွေးအားကောင်းရန်နှင့် ဗီတာမင်များ၊ 21. Allegra = H1-receptor antagonist အလာဂျီရခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ တနေ့ ၁ ပြား၊ 22. Allopurinol, Zyloprim, Zyloric (ဂေါက်)၊ အဆစ်နာ။ Initially 100-200-300-600 mg daily; Maintain 200-600; 15 mg/kg OD 23. Alpha-Glucosidase inhibitors (Acarbose, Miglitol, Voglibose) ဆီးချိုစားဆေး၊ 24. Alpink-Z = (Ferrous Sulphate + Folic acid + Vitamin B12 + Elemental Zinc) ဇင့် (သွတ်ဓါတ်) ပါသော သွေးအားကောင်းစေရန်ဆေး၊ 25. Alprazolam, Altrex, Xanax, Alprest-0.25, Alzolam, Praxal, Zolan, Alprocontin စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ Anxiety သက်သာစေရန်ဆေး၊ 0.25 mg BD or TDS; 0.5 mg every3days; တနေ့လျင်4mg ထက်ပိုမပေးရ၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = စိတ်ထိုင်းမှိုင်း၊ သွေးဖိအားကျ၊ ဝမ်းပျက်၊ မှတ်ဥာဏ်လျှော့၊ 26. Alteplase 0.75 mg/kg နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ 27. Aluminium Hydroxide and Oxide, Magnesium Trisilicate 250-1500 mg အက်စစ် ဓါတ်ပျယ်ဆေး၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ 28. Aluminum subacetate ဆေးရည်ထဲမှာ မိနစ် ၂ဝ တနေ့ ၂ ကြိမ် စိမ်ပါ။ Tinea Manuum & Tinea Pedis (Athlete's Foot) အားကစားသမား ခြေထောက်၊ 29. Amcold syrup (Cetirizine hydrochloride5mg + Ambroxol hydrochloride 60 mg) 5-10 ml OD or BD အအေးမိခြင်း၊ အလာဂျီ၊ 30. Amicip, Amikacin sulphate = 15 mg/kg ပဋိဇီဝဆေး၊ နှလုံးအတွင်းသား-ဦးနှောက်မြှေး-သည်းခြေအိတ်-မွေးလမ်း-အရိုး-အဆစ်-သွေးထဲ ပိုးဝင်ခြင်း၊ မီးလောင်နာ၊5mg/kg BD IV/IM; 15 mg/kg/day in2or3equally divided doses every 8 or 12 hours. Maximum daily dose 500 mg TDS ပြင်းထံသော ပိုးဝင်ခြင်းများ၊ မွေးစကလေးပိုးဝင်ခြင်း၊ = 10 mg/kg followed by 7.5 mg/kg BD ကျောက်ကပ် အလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ Amikacin (5 mg/kg BD IV/IM) (7.5 mg/kg BD IV) နှလုံးအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြှေး-အသက်ရှူလမ်း-ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Amikacin 15 mg/kg သွေးပြန်ကြော ရောင်ခြင်း၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ် ထိခိုက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ နားထိခိုက်၊ 31. Amiloride (hydrochloride) ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ = 5-10 mg tablet daily 32. Aminophylline, Theophylline, Etophylate အသက်ရှူလမ်းကျဉ်းခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ထိုးဆေး-စားဆေး၊ 250-500 mg (4-5 mg/kg) IV slowly, 100-300 mg TDS/QID Orally ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အအိပ်ပျက်၊ 33. Amitriptyline (HCl), Nortriptyline, Desipramine: စိတ်ကျရောဂါ၊ နာတာရှည်နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း အမျိုးမျိုး၊ 25-50 mg HS and 10-150 mg HS; 0.285-0.429 mg/kg QID IM; Amitriptyline 150-250 mg (max 300 mg) ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အိပ်ချင်၊ ဝမ်းချုပ်၊ သွေးဖိအားကျ၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အလေးချိန်တက်၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ 34. Amlodipine (Besylate), Norvasc (Calcium channel-blocking agent) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၊ သွေးတိုး၊ 2.5- 5-10 mg QID; Maximum dose: 10 mg/24hr; 35. Amodiaquine ငှက်ဖျားရောဂါဆေး၊ အခြားဆေးများနှင့် တွဲပေးရသည်။ 36. Amphotericin B = Antifungal Drugs မှိုအတွက်ဆေး၊ 0.3 to 0.7 mg/kg/day; Cryptococcal meningitis ဆိုးဝါးသောမှိုပိုးအတွက် 1–1.5 mg/kg daily; ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း Flucytosine နှင့် တွဲပေးသည်။ 40-80-100 mg QID 37. Ampicillin ပနယ်စလင်အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေး၊ Penicillin နှင့် သတ္တိတူသော်လည်း Gram-negative bacteria တို့အား ပိုမိုထိရောက်သည်။ Pneumonia, Meningitis, Bacteremia, or Endocarditis ဖြစ်လျှင် IV ပေးပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ ပျောက်သွားစေကာမူ ဆေးပါတ်လည်အောင် ပေးရမည်။ အစာနှင့် နီးသည် ဖြစ်စေ ဝေးသည် ဖြစ်စေ ပေးနိုင်သည်။ a. Ampicillin 250-500 mg TDS or 500 mg BD or 750 mg BD x 7-14 days; ကလေး 125-250 mg TDS အစာလမ်း (အူ) ရောင်ခြင်း၊ (500-1,000 mg QID IV/IM) ; Children ½ of the adult dose x 7-14 days နားအလည်ပိုင်း (အင်ဖက်ရှင်)၊ (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ ဆီးလမ်း-ကျောက်ကပ်-နှလုံးသား-အာသီး-လေပြွန်-သည်းခြေလမ်း ရောင်ခြင်း၊ သွေးထဲ ပိုးရောက်ခြင်း၊ အရေပြားအနာ၊ b. Ampicillin 500 mg QID x 7-10 days နူမိုးနီးယား၊ ဒေါင့်သန်းရောဂါ၊ c. Ampicillin 1 Gm x 10-14 days followed by Omeprazole 20 mg or Rabeparzole 20 mg, Lansoprazole 15-30 mg, Pantoprazole 40 mg 30 minutes before meals OD (or) Ranitidine and Nizatidine 300 mg, Famotidine 40 mg and Cimetidine 800 mg HS x 4-8 weeks အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးများကြောင့်ဖြစ်သော အစာအိမ် လေနာ၊ d. Ampicillin3Gm BD/TDS သွားပိုးဝင်၍ ပြည်တည်ခြင်း၊ သွားမနုတ်မီ ၁ နာရီ။ ပြင်းထံသော အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ e. Ampicillin2Gm IV QID အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်း ရောင်ခြင်း၊ f. Ampicillin + Gentamicin 3-week course of IV (မင်နင်ဂျိုက်တစ်) ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ g. Ampicillin 1 Gm QID + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV x 21 days ကျောက်ကပ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊ h. Ampicillin 1-2 Gm QID + Gentamycin2mg/kg TDS + Metronidazole 500 mg IV TDS ဝမ်းတွင်းမြှေး ရောင်ခြင်း၊ i. Ampicillin 500 mg IV QID or Ciprofloxacin 250 mg IV BD ခွဲစိတ်ပြီးဖြစ်သော သဲခြေအိတ် ရောင်ခြင်း၊ j. Ampicillin2Gm + 1 Gm of Probenecid နှင့်တွဲပေးပါ၊ (ဂနိုးရီးယား)၊ k. Ampicillin 1 Gm QID + Gentamycin 1 mg/kg TDS IV x 21 days အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ မွေးလမ်း ရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်ခြင်း၊ l. Ampicillin 1-2 Gm QID x2weeks (500-1,000 mg QID IV/IM) (18.75 mg/kg QID Oral/IV/IM) တိုက်ဖွိုက်၊ m. Methotrexate, Sulfa drugs, Tetracycline ကိုယ်ဝန်တားဆေးတို့နှင့် တွဲမပေးသင့်။ n. ဆိုးကျိုးများ၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းမူး၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အိပ်မရ၊ ပျိူ့၊ ယား၊ အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အင်ပြင်ထွက်။ အသက်ရှူခက်၊ မျက်နှာ-နှုပ်ခမ်း-လျှာ-လည်ပင်းရောင်၊ ကိုယ်ပူ၊ ချမ်းတုံ၊ မူးဝေ၊ ယားယံ၊ အိပ်မပျော်၊ စိတ်မကြည်၊ ဗိုက်အောင့်၊ သွေးယို၊ ဆီးနည်း၊ တက်ခြင်း၊ မွေးလမ်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း၊ မှက်ခရု၊ 38. Analgin, Analgesin, Dipyrone = NSAID အနာ-အကိုက်-အဖျားသက်သောဆေး၊ 500-1000 mg QID Orally, 0.8 to 1.6 g IM/IV ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = (ရှော့ခ်)၊ အရေပြားနီ၊ သွေးဖိအားကျ၊ ဆီးနီ၊ 39. Angizem, Diltiazem (HCl) နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း၍ ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ 60-120-360 mg BD; 30-60 mg TDS; Maximum dose: 480 mg/day 40. Anidulafungin (Eraxis) ပြင်းထံသော မှိုရောဂါဆေး၊ ပဌမနေ့ 200 mg ထို့နောက် 100 mg daily 41. Antacids လေနာရောဂါ ဆေးများ၊ အစာအိမ် အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေးများ၊ Aluminum carbonate, Aluminum hydroxide, Calcium carbonate, Calcium phosphate, Magnesium aluminosilicate, Magnesium carbonate, Magnesium glycinate, Magnesium hydroxide, Magnesium oxide, Magnesium trisilicate, Sodium bicarbonate 42. Anti-Emetics အအန်ပျောက်ဆေးများ a. Antihistamines (Cyclizine, Cinnarizine, Meclozine Hydrochloride, Promethazine) (အင်တီဟစ်တမင်း) ခေါ် (အာလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်းအတွက် အသုံးများသည့် ဆေးများ၊ b. Phenothiazines (Prochlorperazine, Trifluoperazine, Levomepromazine) စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အလွန်အန်ခြင်း၊ ကြို့ထိုးခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ပါးစပ်ကသာမက စအိုကလည်း ပေးနိုင်သည်။ c. Metoclopramide အစာအိမ်ထဲကအစာကို မြန်မြန်အောက်သို့ ပို့ပေးသည့်အတွက် အစာတင်းနေ၍ အန်ချင်သည်ကို သက်သာစေသည်။ စားဆေး၊ ထိုးဆေး၊ စအိုက ပေးနိုင်သည်။ d. Meclizine = Antivert (12.5 mg – 25 mg – 50 mg), Dramamine, Gravol, Gravamin, and Vertirosan တို့အစား meclizine ကိုပေးနိုင်သည်။ ထိရောက်မှုတူပြီး မကောင်းကျိုးနဲသည်။ Emesafene = meclizine 1/3 + pyridoxine 2/3 e. Domperidone အစာစားပြီး အန်ချင်သည့် ရောဂါအတွက် ပေးသည်။ အချို့က မိခင်နို့ထွက် များစေရန် သုံးသော်လည်း မသုံးရန်အကြံပြုထားသည်။ f. Serotonin antagonists (5HT3) (Dolasteron, Granisetron, Ondansetron) စားဆေး၊ ကပ်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ ကင်ဆာ အတွက်ပေးရသည့် ဆေးများကြောင့်ဖြစ်သော အန်ချင်စိတ်ကို သက်သာစေသည်။ g. Dexamethasone စတီရွိုက်ဆေး၊ ရောင်ခြင်း-နီမြန်းခြင်း၊ အလာဂျီဖြစ်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ကင်ဆာတို့အတွက် သုံးသည့်ဆေး။ h. Hyoscine hydrobromide (Scopolamine hydrobromide) အသက်ရှူလမ်းမှ ထွက်သည့် စစ်ထုတ်ရည်အား တားသည့် ထိုးဆေး၊ မေ့ဆေးပေး၍ ခွဲစိတ်အပြီးပန်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ပေးသည်။ ခွဲစိတ်ခြင်း မပြုမီ ပေးရသည်။ i. Nabilone ကင်ဆာအတွက် ပေးသည့် ဆေးကြောင့် အန်ခြင်း၊ တနေ့ ၂-၃ကြိမ်၊ အစာနှင့် နီးသည် ဖြစ်စေ ဝေးသည်ဖြစ်စေ ပေးနိုင်သည်။ j. Aprepitant ကင်ဆာအတွက်ပေးသည့်ဆေးကြောင့် အန်ခြင်းအတွက် ၁ နာရီကြိုပေးရသည်။ k. Morning sickness ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အန်ခြင်း။ B-Natal TheraPops နှင့် B-Natal Lozenges တို့သည် ဗီတာမင် ဘီ-၆ ပါသည့်ဆေးများဖြစ်ပြီး၊ Psi Bands Acupressure ကို လက်ကောက်ဝတ်မှာ ပတ်ထားနိုင်သည်။ Bands Organic Morning Wellness Tea နှင့် Organic Heartburn Relieving Tea QueaseEASE နှင့် Essential Oil Therapy တို့မှာလည်း ခေတ်သုံးဆေးများ ဖြစ်သည်။ l. Hyperemesis Gravidarum ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အလွန်အကြွံ အန်ခြင်း။ Promethazine, Prochlorperazine 10 mg IV (မိုင်ဂရင်း) အရေးပေါ် ထိုးဆေး၊) and Metoclopramide တို့ကို ပေးနိုင်သည်။ Pyridoxine ဗီတာမင် ဘီ ၆၊ Doxylamine 10 mg နှင့် (B6) 10 mg ရောပေးသင့်သည်။ Promethazine 12.5-25 mg ကို ၄ နာရီခြား၎င်း၊ Prochlorperazine 25 mg ကို စအိုမှ ၁၂ နာရီခြား ပေးနိုင်သည်။ Meclizine, Dimenhydrinate, Metoclopramide တို့ကိုလည်း ပေးနိုင်သည်။ Methylprednisolone 16 mg စားဆေး or intravenously every 8 hours ကို နောက်ဆုံးအဖြစ် ပေးနိုင်သည်။ ချင်း Ginger capsules of 250 mg taken4timesaday သည်လည်း ကောင်းသည်။ m. ခွဲစိတ်ကုရာတွင် မေ့ဆေးကြောင့် ပျို့-အန်ခြင်း၊ A Serotonin antagonist နှင့် phenothiazine or dexamethasone ရောထားသည့်ဆေး 90% ကောင်းသည်။ Phenothiazines, Metoclopramide, 5HT3 antagonists, Antihistamines and Dexamethasone တို့ကို ကာကွယ်ရန်။ n. Motion sickness ခရီးသွားစဉ် ပျို့-အန်ခြင်း၊ Hyoscine, Cyclizine, cinnarizine, promethazine တို့ကိုပေးနိုင်သည်။ Dramamine အသုံးအများဆုံးဆေးကို အသက် ၂ နှစ် အထက်ပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်ကားမောင်သူအား မပေးရ။ အရက်နှင့်မတွဲရ။ အခြား အိပ်ချင်စေသည့် ဆေးများနှင့် တွဲမပေးသင့်ပါ။ ခရီးမထွက်မီ နာရီဝက်၊ ၁ နာရီကြိုတင် သောက်ရမည်။ အချို့ဆေးက ၄ နာရီခံပြီး အချို့က ၂၄ နာရီခံသည်။ ဆေးကို ရေတဖန်ခွက် အပြည့်ဖြင့် သောက်ပါ။ 43. Antihistamines = Cetirizine, Chlorpheniramine, Cinnarizine, Clemastine, Cyclizine, Desloratadine, Dexchlorpheniramine, Dimenhydrinate (most commonly used as an antiemetic), Dimetindene, Diphenhydramine (Benadryl), Doxylamine, Ebastine, Embramine, Fexofenadine, Levocetirizine, Loratadine, Meclozine Hydrochloride, Olopatadine, Pheniramine, Promethazine, Quetiapine (အင်တီဟစ်တမင်း) ခေါ် (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်းအတွက် ဆေးများ၊ 44. Anusol Ointment, Pilex Ointment, Germoloids Ointment: လိပ်ခေါင်းရောဂါ ထည့်ဆေးများ။ 45. Aquazide (Hydrochlorothiazide), Esidrex, Thiazide 12.5-25-50-100 mg daily ဆီးသွားစေသည့် သွေးတိုးကျဆေး၊ ကိုယ်ရောင်ခြင်းအတွက်ဆေး၊ 46. Artemisinin-based combination therapy (ACT) ငှက်ဖျားအပြင်းစားအတွက် (အာတီမစ်စင်နင်) ပါသည့် ဆေးအတွဲများ၊ a. Artemether + Lumefantrine, Adult (14 years and above) = 0h - 8h - 24h - 36h - 48h - 60h =4-4-4-4-4–4b. Artesunate (50 mg) + Amodiaquine (153 mg) Day 1 - Day2- Day3- Day 1 - Day2- Day3=4-4-4-4-4–4c. Artesunate (50 mg) + Mefloquine (250 mg) Day 1 - Day2- Day3- Day 1 - Day2- Day3=4-4-4-0-4–2d. Artemether (20 mg) -Lumefantrine (120 mg) Artesunate (50 mg) + Sulfadoxine-pyrimethamine (500/25) Day 1 - Day2- Day3- Day 1 - Day2- Day3=4-4-4-3-0–047. Ascorbic Acid (Vitamin C) 100-500 mg daily ဗီတာမင် (စီ) နည်းသည့် (စကာဗေ) ရောဂါအတွက်ဆေး၊ 48. Aspirin (Barbiturate), Sodium Salicylate, Acetylsalicylic acid, = NSAID အနာ-အကိုက်-အဖျား-အရောင်၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အရိုးတီဘီ၊ ဂေါက်၊ Adults 325-500-650-1000 mg TDS/QID, Children2to4years 160-240-320-325-480 mg QID; သွေးခဲသဖြင့် သွေးကြောပိတ်ခြင်းအတွက် Adults 81-162.5-325-1000 mgaday or every other day; Aspirin 0.6-0.9 Gm4hourly ရက်တို ရူမက်တစ်အဖျား၊ Aspirin 10-15 mg/kg QID နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊ 49. Atecard-D, Tenoclor, Tenorid (Atenolol 50 mg + Chlorthalidone 25 mg) OD; (Atenolol 100 mg + Chlorthalidone 25 mg) (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ 50. Atenolol = (ဘီတာ-ဘလော့ကား) အုပ်စု၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါ ထခြင်း၊ 50 mg 10 minutes after the last (IV) dose followed by another 50 mg 12 hours later. Then, 100 mg OD or 50 mg BD for another6to9days or until discharge from the hospital နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ 50 mg OD သွေးတိုးကျဆေး၊ = 50 mg, 100 mg; နှလုံးရောဂါ (Attack, Stroke) ရခြင်း၊5mg IV or 50-100 mg Oral Daily 51. Atovaquone-proguanil (Malarone) ငှက်ဖျားကုသရန်-ကာကွယ်ရန်ဆေး၊ Chloroquine နှင့် တွဲပေးရသည်။ Proguanil (HCl) 100 mg;5mg/kg daily for children ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပါးစပ်အနာဖြစ်၊ အရေပြားနီ၊ ဆံပင်ကြွတ်။ 52. Atropine Sulphate အက်စစ် အထွက်နည်းဆေး 0.5-1.0 mg IM ထိုးဆေး၊ မျက်စိထဲခပ်ပါက သူငယ်အိမ် ကျယ်စေသည်၊ နှလုံးခုန်နှေးသည်ကို ကုနိုင်သည်၊ ပိုးသတ်ဆေး အဆိပ်သင့်ခြင်း အတွက် ထိုးပေးနိုင်သည်၊ ချွဲထွက်နည်းစေရန် မေ့ဆေးမပေးမီ ထိုးပေးရသည်။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ Attack, Stroke ရခြင်း၊ 300 to 1200 mcg IV/IM/SC every4to6hours; 0.5 to 1.0 mg IM/IV အာခေါင်ခြောက်စေသည်။ 53. Augmentin (Amoxicillin, 250 mg, 500 mg, or 875 mg, plus 125 mg of Clavulanic acid) ; Augmentin XR (Amoxicillin 1 g plus 62.5 mg of Clavulanic acid) ; Unasyn (Ampicillin 1 g plus Sulbactam 0.5 g, and Ampicillin3g plus Sulbactam 1 g) ; and Zosyn (Piperacillin3g plus Tazobactam 0.375 g, and Piperacillin4g plus Tazobactam 0.5 g) 30 mg/kg ရက်တို နားယောင်ခြင်း၊ 500 mg TDS 54. Avil (Aventis) = Pheniramine Maleate (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နှာစေး-ချောင်းဆိုး၊ ပျား-အင်းဆက်ကိုက်၊ (အလာဂျီ)၊ အရေပြားယားခြင်း၊ ကားမူးခြင်း၊ 15-30-50 mg BD/TDS ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = အိပ်ချင်း၊ မူး၊ ဗိုက်နာ၊ 55. Avomine, Phenergan (Promethazine) 25 mg HS or BD/TDS (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင် အအန် အယား ပျောက်ဆေး၊ 10 -25 mg4hourly; 0.75 mg/kg BD အင်းဆက်ကိုက်ခြင်း၊ ခရီးသွားစဉ် ခေါင်းမူး၊ 56. Azithromycin (မက်ခရိုလိုက်အုပ်စု) ပဋိဇီဝဆေး၊ အစာမစားမီ ၁ နာရီ၊ စားပြီး ၂ နာရီ ပေးပါ၊ a. 500 mg as loading dose, then 250 mg/d for4days; နာပြည်ယို၊ အာသီးရောင်၊ လေပြွန်ရောင်၊ နူမိုးနီးယား၊ ဆိုင်းနပ်စ် ရောဂါ။ STD ရောဂါတွေအတွက်လည်း ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂနိုမဟုတ်တာကို ပိုသုံးတယ်။ b. Zithromax 1 g ကို C trachomatis ဆီးလမ်း-မွေးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ရှန်ကာရွိုက်၊ c. (250-500 mg Daily Orally) (7.5-20 mg/kg Orally) နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်၊ (လိုင်မ်) ရောဂါ၊ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ၊ နှလုံးအတွင်းသား-အရိုးအဆစ်-အစာခြေလမ်း- သားအိမ်အဝ ရောင်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ သာမန်တိုက်ဖွိုက်၊ အသက်ရှူလမ်း၊ အရေပြားပိုးဝင်ခြင်း၊ d. 20 mg/kg stat ဂိုနိုးရီးယားကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊ e. 500 mg on day 1 and 250 mg on days 2-5 (ကလာမိုင်ဒီးယား) ကြောင့် ဆီးပြွန်အဝ-သားအိမ်အဝ ရောင်ခြင်း၊ ရက်တို ဆိုင်းနပ်စ်၊ နူမိုးနီးယား၊ အာသီး-လည်ချောင်းနာ၊ f. ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ပျို့-အန်၊ အရေပြားနီ၊ အစာအိမ်အောင့်၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မူး၊ လေတက်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် နို့တိုက် မိခင်များအား သတိဖြင့်ပေးပါ၊ 57. Aztreonam (Azactam) 50 mg/kg ဆီလမ်း၊ အသက်ရှူလမ်း အောက်ပိုင်း၊ သွေးထဲ၊ အရေပြား၊ ဗိုက်ထဲ၊ မွေးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ 58. Bacitracin (12500.000 IU/g TDS Topical) ပိုးသေးစေသည့်လိမ်းဆေး၊ 59. BCG Vaccine vial of 10 doses တီဘီ ကာကွယ်ဆေး။ a. (0.05 ml) for infants under one month old and b. (0.10 ml) for 1 to 12 months with sodium chloride intradermal injection 60. Beclometasone ပန်းနာနှင့် အသက်ရှူလမ်းပိတ်ရောဂါ ရှူဆေး၊ = inhalation (aerosol) = 50 micrograms per dose; 250 micrograms per dose 61. Becosules capsules (B-complex forte with vitamin) ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုဆေး၊ 62. Benadryl (အင်တီဟစ်တမင်း) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ အအေးမိခြင်း၊ (အလာဂျီ)၊ တနေ့ အများဆုံး 300 mg ပေးပါ၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ အိပ်ချင်၊ အစာအိမ်အောင့်၊ 63. Bencid (Probenecid) 250-500-1000 mg BD x 1 week ဂေါက်ရောဂါအတွက်ဆေး၊ 64. Bendrofluazide 0.03-0.385 mg/kg daily သွေးတိုးအတွက် ဆီးသွားစေသည့်ဆေး၊ 65. Benzamycin (Erythromycin + Benzoyl peroxide) ဝက်ခြံအတွက်ဆေး၊ 66. Benzarthine penicillin G ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင်(ပနယ်စလင်) ပဋိဇီဝဆေး၊ a. Benzathine Penicillin G 2.4 million units weekly x3weeks ရူမက်တစ်ရောဂါ၊ အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊ b. Penicillin V 200,000-250,000 units BD or Sulfasoxazole 1 Gm daily or Erythromycin 250 mg BD အာရုံကြော ဆစ်ဖလစ်၊ c. Benzathine penicillin G 2.4 million units IM onceaweek x3weeks ရက်တို ရူမက်တစ်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်၊ ဆစ်ဖလစ် ပဌမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့်။ 67. Benzoic acid + Salicylic acid (ဖန်းဂပ်စ်) ခေါ် မှိုရောဂါလိမ်းဆေး၊ = Ointment or cream, 6% + 3%; 68. Benzoyl Peroxide (Benzac) Gel ဝက်ခြံအတွက်ဆေး၊ အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် လိမ်းဆေး၊ 69. Benzyl benzoate 25% ဝဲပျောက်လိမ်းဆေး၊ 70. Benzylpenicillin (Na or K) ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင် (ပနယ်စလင်) ထိုးဆေး၊ 71. Besylate, Amlodipine သွေးတိုးဆေး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆေး၊ 2.5-5-10 mg daily 72. Beta blockers = Acebutolol, Atenolol, Betabloc Forte, Betacap, Ciplar, Inderal, Metoprolol, Propanolol (ဘီတာ-ဘလော့ကား) Adrinaline ကို တားဆီးပေးသည်။ နှလုံးတင်းအား လျှော့စေသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းလျှော့သည်။ သွေးကြောများ၏ ကြုံ့နိုင်စွမ်းနည်းစေသည်။ နှလုံးက အောက်စီဂျင် လိုအပ်မှုအား လျှော့ချပေးသည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးခုံနှုန်းမမှန်သည့်ရောဂါ၊ သွေးတိုး။ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းကိုက်-ခေါင်းမူး ရောဂါ၊ Stage fright အကြောက်ရောဂါ။ 73. Betadine (Povidone Iodine Ointment5%) (အိုင်အိုဒင်း) ပါတဲ့ဆေး။ အရေပြားမှာ ပိုးဝင်တာ၊ အနာ၊ ဒဏ်ရာ၊ မီးလောင်နာ၊ ခွဲစိတ်ပြီးအနာ၊ အနာထဲကိုပါ ထည့်ပေးနိုင်တယ်။ 9-12% ရောဂါပိုးသန့်ဘို့ အများဆုံး သုံးတယ်။ 10% Povidone-iodine in water က အနာအဆာထည့်ဘို့၊ အနာမခွဲခင် အရေပြားသန့်ဘို့ သုံးနိုင်တယ်။ Iodophor ကို ဝိုင်-အရက်ချက်သူတွေ၊ နို့လုပ်ငန်းသမားတွေက ပုလင်းတွေ၊ ကရိယာတွေ သန့်စေအာင် သုံးတယ်။ 74. Betamethasone (Diprolene) Cream 0.05% BD (ကော်တီဇုံး) ပါတဲ့ဆေး။ နာတာရှည်အရေပြားအနာ၊ Eczema နာတာရှည် ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ နှင်းကူနာ အတွက်ဆေး။ ရိုးရိုး အနာ-ဒဏ်ရာတွေကို မထည့်ရပါ။ 75. Betapen-VK, (Phenoxymethyl Penicillin K), Penicillin V ပနယ်စလင် စားဆေး၊ ပြည်တည်နာ၊ နူမိုးနီးယား၊ အရေပြားနာ၊ အသက်ရှူလမ်း-အာသီးရောင်၊ လည်ချောင်းနာ၊ နားပြည်ယို၊ ဆုံဆို့ နာ၊ လေးဘက်နာ၊ ဂနိုရီးယား၊ အရိုး-အဆစ်ရောင်၊ 250-500 mg QID; 12.5 mg/kg QID; 76. Betnovate, Betnelan, Betnesol, Walacort အလာဂျီကြောင့် အရေပြားရောင်ခြင်း၊ နှင်းကူနာ၊ ယားခြင်း၊ 77. Bioclox (Cloxacilin) ဗက်တီရီးယားအတွက် (ဘီတာလက်တင်) အုပ်စုဝင်ဆေး၊ Biodoxyl, Biodoxi, Vivocycline, Doxycycline, Tetracycline အသက်ရှူ-ဆီးလမ်းပိုး၊ နူမိုးနီးယား၊ မျက်ခမ်းစပ်၊ ကာလဝမ်း၊ = 200 mg followed by 100 mg; 78. Bisacodyl, Dulcolax ဝမ်းန&#